Madaxweynaha oo saacadaha Soo socda ku dhawaaqaya R/Wasaaraha Cusub iyo Caqabadaha hareeyay ….. | Somali - Diaspora
Madaxweynaha oo saacadaha Soo socda ku dhawaaqaya R/Wasaaraha Cusub iyo Caqabadaha hareeyay …..
Arbaco, Oktoobar 03, 2012 (Moment Media Group) — Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqi doono shaqsiga noqonaya Ra’isul Wasaaraha cusub ee dalka. Mudada 30-ka cisho ee la rabo inuu kusoo magacaabo Ra’isul Wasaaraha sida uu qabo dastuurka u dagsan dalka ayaa Hal Todobaad ugu harsan inuu ku soo magacaabo Wasiirka Koowaad, waxayna Warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in Mas’uulkii qaban lahaa jagadaasi uu miiska u saaran yahay, laguna dhawaaqi doono saacadaha dhow.
Madaxweynaha ayaa soo gabagabeeyay wadatashiyadii uu ka lahaa cida noqoneyso Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, wuxuu mid mid uu arintaasi kala hadlay Qabaa\_ilka iyo Siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Hadal uu u sheegay wakiilo ka kala socday ururada Bulshada Rayidka, ayuu Prof. Xasan Sheekh ku yiri in hadii uu Ra’isulwasaaraha soo daahiyey in aysan daahi doonin dhismaha Golaha Wasiirada. Dadka u dhuun daloola siyaasada Dowlada cusub waxa ay leeyihiin madaxweynaha waxa uu diyaariyeyba wasiiro gaaraya 10 oo uu isaga wato kuwaas oo uu rabo in Ra’isulwasaaraha cuusb u gudbiyo.
Dhowr qof ayaa loo saadaalinayaa laakiin waxaa aadag in la ogaado siyaasadda iyo qorshaha madaxweynaha oo wax badan aan laga ogaan karin. Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku jira wadatashiyo ku saabsan sidii uu kusoo magacaabi lahaa ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, iyadoo jagadan ay ku loolamayaan mas’uuliyiin fara badan oo uu ku jiro ra’iisul wasaaraha xilligiisu sii dhammaanayo. Wadatashiyada uu wado madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay imaanayaa xilli uu gabaabsi yahay waqtiga looga baahnaa inuu kusoo magacaabo ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, kaasoo laga doonayo inuu soo dhiso xukuumad dalka hoggaamisa.
“Sababaha aan idin kugu imid waa inaan idin kala tashado ra’iisul wasaaraha aan soo magacaabayo. Su’aashuna waa; Ra’iisul wasaarha aan soo magacaabayo sidee doonaysaan inuu noqdo… maxaad doonaysaa inuu qabto… maxaase doonaysaan inuusan taaban ama ka leexdo,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo la hadlyay waxgarad uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay kula kulmay degmooyinka Baydhabo iyo Baladweyne oo uu booqasho ku tagay. Maalin walba waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya ruuxa la doonayo in loo magacaabo xilkan, iyadoo mararka qaarkood ay dadku sheegayaan in loo magacaabayo xubno kale oo ku cusub siyaasadda, Madaxdii hore musuqmaasuq lagu heystaa weli.
Madaxweynaha ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay wuxuu wadatashiyo ku aaddan magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub kula yeelanayay Muqdisho waxgarad, siyaasiyiin, ururrada bulshada rayidka ah iyo weliba qaybaha kala duwan ee shacabka oo ay ku jiraan dhallinyarada iyo haweenka, si uu uga helo fikir ku aaddan magacaabista ra’iisul wasaaraha. Inkastoo aan la ogeyn ruuxa jagadan kusoo bixi doona ayaa haddana dadku waxay mar walba is-weydiinayaan ruuxa xilkan kusoo bixi kara, iyadoo goobaha shacabku isugu yimaadaan intooda badan looga doodayo cidda xilkan kusoo bixi karta.
“Haddii madaxweynuhu uu magacaabo nin horay siyaasadda ugu jiray waxay taasi sababi kartaa in sumcaddiisa ay la dagto. Waajibka madaxweynaha saaran waa inuu si wanaagsan uga fikiro cidda uu xilkan u dhiibayo, waayo xilku waa mid aad u culus,” ayaa ka mid ah erayada ay dadku ku sheekeysanayaan. Xilliyada soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo ra’iisul wasaaraha uu u xusay inuu soo dhiso dowlad dalka hoggaamisa afarta sano ee soo socota, iyadoo xilligii madaxweynaha looga baahnaa inuu ra’iisul wasaaraha kusoo magacaabo uu ku eg-yahay 10-ka bishan Oktoobar.
Shirkad Laga leeyahay Turkiga oo sahamin shiidaal u timid Somaliland Madaxweyne Raysal wasare iga dhig Waxaan ahay..!! (kaftan Siyaasadeedka Shabakadda Moment Media Group)